Ọbụbụ ọnụ nke Ifuru Ọlaedo | Martech Zone
Tuesday, April 10, 2007 Wednesday, April 11, 2007 Douglas Karr
Ekwenyeghi m na m na-ekwu okwu banyere ihe nkiri sịnịma na blọọgụ. Izu gara aga bụ nnukwu ihe nkiri maka nwa m na mụ. M sonyeere Blockbuster Online ma ọ dị mma. Ọ bụrụ na ịmara m, ị ga-amata na ọ na-esiri m ike ịkwụsị ịgbazite na Video ezinụlọ mpaghara. Blockbuster enwere ụmụ nwanyị mara mma na-egbutu oge m na-akwụ ụgwọ na ọkara oge ọ bụla m gara ma jiri ọchị m. Nke a bụ otu nleta nkịtị si aga:
BVL: Maazị Karr, ị nwere $ 14.00 na ụgwọ mbubreyo
Maazị Karr: Absolutely mara ezigbo mma! Ị nwere enyi nwoke?
BVL: (ọchị) Uhhh… ee.
Maazị Karr: Ọfọn, mgbe ị hụrụ ya n'abalị a, jide n'aka na ị ga-agwa ya na ọ bụ na onye kacha nwee ihu ọma n’elu ụwa.
BVL: (mụmụkwuo ọnụ ọchị, agba agba ọbara ọbara)
Maazị Karr: Ọ dị m nwute… ị mara mma nke ukwuu anụghị ihe ikwuru!
BVL: Oh… i nwere ụfọdụ mbubreyo ụgwọ ma m na-agwa gị ihe, olee banyere ị na-akwụ ha niile n'abalị a na m ga-ana ọkara.
Maazị Karr: Chaị… mara mma ma na-emesapụ aka. Fantastic mara mma. Daalụ !!!
Ugbu a ihe ị na-ahụghị ma ọ bụ nụ na ihe omume a dum bụ ụmụ m. Nwa m nwoke na-apụ ngwa ngwa ozugbo anyị kụrụ na tebụl - ọ maara ihe ga-eme na-esote. Nwa m nwanyị, n'aka nke ọzọ, nwere mmasị ịnọ ebe ahụ ma jụọ m swiiti n'oge m na-arụ ọrụ. Mgbe m kwụrụ ụgwọ, ọ na-enwe mmasị ịgwa ụmụ nwanyị otu m si eme na oge ọ bụla m batara, afọ ole m dị, etu m siri chọọ, ma ọ bụ naanị etu isi awọ m nwere. Chineke hụrụ ya n'anya!
Kwuwe! M digress. Ọ bụrụ na ị nwere ịhụnanya maka ihe nkiri epic, ọdachi Shakespearian, na / ma ọ bụ ihe nkiri nka, Nkọcha nke Ọlaedo Ọlaedo bụ atọ. A na-esere ihe nkiri a na nke kachasị ukwuu n'ụwa, nwere agba mara mma, omume ngosi na uwe a na-enweghị atụ. Ahụrụ m ihe nkiri ahụ. Mgbazinye ma ọ bụ zụta ya taa!
Jide n'aka na ị lele DVD zuru ezu na atụmatụ ndị ọzọ. Ihe omuma banyere otu esi eme ihe nkiri a ma duzie ya na ndi oru ihe nlere ka ha mee ihe nkiri a bu ihe uto.
Mụ na di m sonyere mmemme "nkwụghachi ụgwọ" na nso nso a. Ihe nkiri anyị na-atụ aro n'izu a ga-abụ Pịa na Eragon. Kporie ihe nkiri gị na mail!
LOL… Echere m na ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma na onye na-akwụ ụgwọ Blockbuster. Enwere m enyi nwere n'ezie akara na ya Experian n'aka akụkọ maka $ 498 na mbubreyo ụgwọ. Eleghị anya ọ kwesịrị ya, mana chaị…
Ee, ụmụ okorobịa na Blockbusters nwere ike ha agaghị enwe ekele maka ya. $ 498?! Chei! Odi ya ka o jiri ugbo ala puo ma ghara ilaghachi! Echere m ma ọ gbaziri usoro egwuregwu.